downloads 5 230
diyaarad Tani waxaa la abuuray isticmaalaya FSDS 2.24. In kasta oo xaqiiqda, waxaa aad ka bixin kartaa qaababka badan oo la heli karo oo kaliya in lagu daydo abuuray gmax - oo ay ku jiraan dhaqdhaqaaq iyo clickable qol dalwaddii la qalab dhameystiran iyo iftiiminta qol. aaladaha Custom siiyaan istuuray aad u macquul ah Z-43, oo ay ku jiraan nidaamka liiska.
Digniin: Eeg liiska warbixinta ee ku saabsan sida loo sax ah diyaaradda bilaabi-up (iyada oo aan la isticmaalayo Ctrl + E).
Zlin Z-43 waa xubin ka mid ah qoyska Z-40 soo saaray Moravan Otrokovice. Waxaa la qorsheeyay bedel casri ah, waayo, L-40 Metasokol qeybtii labaad ee 1960s ah. dhismaha Waa ku salaysan yahay ku saabsan ee ka horreeyay, waxay Z-42. Laakiin aad aragto kartaa kala duwan la arko marka hore - qol 4 fadhiya, sooctey more adag iyo qaabka garabka is beddelay.
The "Afar-saddex", sida ay ugu magac daray in aeroclubs badan Czech, waxaa loo isticmaalaa tababar asaasi ah oo ay ku jiraan radionavigation, duulimaad meelaha iyo duulaya isboortiga. Z-43s waxaa sidoo kale loo isticmaalaa duulaya sax iyo dibad-duulaya.
Inkastoo mararka qaarkood dhaleeceeyay, gaar ahaan marka la eego dhaqaalaha hawlgal, waa diyaarad ugu baahsan ee this category ee Jamhuuriyadda Czech iyo Slovakia iyo waxa loo isticmaalo by aeroclubs iyo milkiilayaasha gaarka ah labadaba. (Source: https://pwdt.virtualskies.net)